ဒီလက်စွဲစာအုပ်ဖုံးလွှမ်းMotionBoard Cloud ။
အင်္ဂါရပ်ဖော်ပြချက်များတွင်ဆက်ကပ်အပ်နှံလက်စွဲMotionBoard Cloud နှင့်များအတွက်လက်စွဲစာအုပ်MotionBoardVer. 6.2 ကဲ့သို့နီးပါးတူညီသော features တွေရှိပါတယ်MotionBoard Cloud , အသုံးပြုကြသည်။ ခြားနားချက်MotionBoard Cloud နှင့်MotionBoardVer. 6.2 သက်ဆိုင်သောအင်္ဂါရပ်၏ဖော်ပြချက်တွင် "သို့မဟုတ်" ၌စစ်ဆေးနိုင်သည်။အင်္ဂါရပ်များကွဲပြားမှု " တိကျတဲ့အင်္ဂါရပ်လည်းမရှိဆိုပါကMotionBoard Cloud for Salesforce ကြောင်းနှင့်ချိတ်ဆက်များအတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်Salesforce ကသီးခြားစီဖော်ပြထားသည်။
ထံအပ်နှံလက်စွဲစာအုပ် MotionBoard Cloud
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလမ်းညွှန် (MotionBoard Cloud)
အသုံးပြုသူလမ်းညွှန် (MotionBoard Cloud)
ဤလက်စွဲသည်နောက်လာမည့်ပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ရည်ရွယ်ထားသောပရိသတ်သည်လမ်းညွှန်တစ်ခုစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည် (လမ်းညွှန်၏အစတွင်ဖော်ပြထားသည်) ။
အဓိကအားဖြင့် created board များလည်ပတ်သူကိုအသုံးပြုသူများ။
အသုံးပြုသူများသည်ဘုတ်အဖွဲ့အသုံးပြုသူဌာနတွင်ရှိသည်ဟုယူဆရသည်။ စီမံခန့်ခွဲသူက၎င်းတို့ထဲမှအချို့ကိုအခြားအသုံးပြုသူများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသော (ဥပမာဘုတ်ပေါ်ရှိဒေတာထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖိုင်တင်ခြင်း) ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးလိမ့်မည်။
များအတွက် operating လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများMotionBoard server (Windows version) သည် Microsoft Windows Server 2016 နှင့် 2019 အတွက်ဖြစ်သည်။
Windows Server 2012 R2 အတွက် "Windows Start menu မှ" ကို "Windows Start screen ပေါ်ရှိ application အားလုံးကိုဖော်ပြရန်" ကိုအစားထိုးပါ။
သုံးစွဲသူ၏သုံးစွဲမှုအတွက်လည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများMotionBoard Microsoft Windows 10 အတွက်
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Windows 8.1 အတွက် "Windows Start menu မှ" ကို "Windows Start မျက်နှာပြင်ရှိလျှောက်လွှာအားလုံးကိုပြသရန်" နေရာမှာအစားထိုးပါ။
ထုတ်ကုန်ဖြန့်ဝေသည့်နည်းလမ်း (ထုတ်ကုန်မီဒီယာသို့မဟုတ်ကူးယူနိုင်သော ISO ဖိုင်များ) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤလက်စွဲစာအုပ်ရှိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အခြားညွှန်ကြားချက်များတွင် "ထုတ်ကုန်မီဒီယာ" အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းကိုကူးယူပြီးပြီဆိုလျှင်၊ ထုတ်ကုန်မီဒီယာကိုအသုံးမပြုမီ ISO ဖိုင်ကိုတပ်ဆင်ပါ။